मुख्यमन्त्री राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी बालिका खड्का फेरी राईलाई भेट्न एमाले मुख्य कार्यालयमै पुगेपछि…. « Gaunbeshi
मुख्यमन्त्री राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी बालिका खड्का फेरी राईलाई भेट्न एमाले मुख्य कार्यालयमै पुगेपछि….
काठमाडौ । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गरेको केही महिना भएको छ । उनले निकै तामझामका साथ विवाह गरेका हुन् ।
विहिवार बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय ९थापाथली० पुगेका मुख्यमन्त्री राईलाई खड्काले भेट्ने प्रयास गरेकी हुन्। उनले आफुलाई राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी छन् ।
आफुलाई धो का दिएर राईले दोस्रो विवाह गरेको भन्दै अब अदालत जाने बताएकी उनले राईलाई ब्यक्तिगत रुपमा भेट्ने प्रयास गरेकी हुन् । राईले भने बालिकासंग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँदै आएका छन् । एमालेको मुख्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सारिँदै छ।
सूचना विभाग दर्ता नं. १२११ /०७५-७६ काठमाडौं-१०, थापागाउँ नयाँ बानेश्वर नेपाल ९८५१११०४२१ / ०१-५२४४७५३ /९८०११०४२११ gcdal25[email protected]